एकताबाट भाग्दै, मोदीसँग झुक्दै– कता जाँदैछन् प्रम ओली ? – Everest Dainik – News from Nepal
एकताबाट भाग्दै, मोदीसँग झुक्दै– कता जाँदैछन् प्रम ओली ?
कमल शर्मा, काठमाडौं । कुनै बेला मोरियार्टी नाम गरेका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत । एकदिन उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी, लेनिनवादी) को कार्यालयमा नेता माधव नेपाललगायतसँग भेट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेछन् ।
ट्याग्स: cpn uml, KP oli, nakabandi, narendra Modi